के तपाई डाटा प्याक सकिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ बिज्ञान/प्रविधि टेलिकम के तपाई डाटा प्याक सकिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ?
९ चैत्र, काठमाडौं । डाटा प्याक सकिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता लिनु पर्दैन । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका वान आवर अनलिमिटेड प्याक, अनलिमिटेड नाइट डाटा प्याक लगायत अफरहरु सस्तोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो लेखआगामी बैशाख भित्रै हेटौंडा–कुलेखानी सुरुङमार्गको बोलपत्र आह्वान गरिने
अर्को लेखकोभिड –१९ः मेडिकल अधिकृत, वरिष्ठ चिकित्सक र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परिचालन गर्न अनुरोध